सट्टेबाजीको कनेक्सन दाउद अर्थात ‘डी’ कम्पनीसम्म ! | abc.com.np
सट्टेबाजीको कनेक्सन दाउद अर्थात ‘डी’ कम्पनीसम्म !
Posted by abc staff.4years,3months ago. ( Comments )
रोशन पाण्डे / काठमाडौं । ब्राजिलमा भईरहेको सर्बाधिक लोकप्रिय बिश्वकप फुटवल खेलका कारण नेपालमा अवैध हुण्डीको कारोबार फस्टाएको छ । अन्डरवल्र्ड डन दाउद अर्थात डी कम्पनीले जन्माएको जुवा ‘बुकी’ अर्थात सट्टेबाजीका कारण अवैध हुण्डीको कारोबार बढेको हो । नेपालमा पनि सट्टाबाजीको अबैध धन्दा मैलाउँदा दैनिक करौडौं रुपैयाँ हुन्डीमार्फत विदेशिन थालेको स्रोतले बतायो । अन्डरवल्र्डका डन दाउद अर्थात डी कम्पनीको नेपाल एजेन्ट नागराज नामले कुख्यात निर्मल जैनको सहयोमा सट्टेबाजीको बोलकबोल भइरहेको छ । नागराजले फालेको सट्टेबाजीको रेट नै राजधानीका क्यासिनो सञ्चालक र गुण्डाका नाईकेले बजारमा फिजाउने गरेका छन् । तर, डी कम्पनीका नेपाल एजेन्ट नागराज कसका मान्छे हुन भन्ने कुरा सट्टेबाजी खेलाउने र खेल्ने प्रायजसो नेपालीलाई जानकारी छैन् ।
नागराज भारतीय प्रहरीको मोष्ट वान्डेट सूचीमा रहेका ब्यक्ति हुन् । स्रोतका अनुसार भारतीय प्रहरीको एक विशेष टोली सट्टेबाजीको कनेक्सन बुझ्न केही दिन पहिले नेपाल आएको छ । अन्डरवल्र्ड डन दाउदको आयस्रोतको २० प्रतिशत सम्पत्ति सट्टेबाजीबाट नै जम्मा हुने गरेको स्रोत बताउँछ । काठमाडौंका क्यासिनोहरुमा अप्रत्यक्ष रुपमा डी कम्पनीको लगानी रहेको भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ ले दिल्लीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । क्यासिनोका सञ्चालकले नै भारतीय मूलका नागराज समुहसँग मिलोमतो गरि नेपालमा सट्टेबाज खेलाउँदै आएका छन् । क्यासिनो सञ्चालकले नै अहिले क्यासिनोका मजदुरमार्फत सट्टेबाजी खेलाउन थालेका हुन् । साग्रिला क्यासिनोका बिकास भुजेलमार्फत अहिले राजधानीमा सट्टेबाजी फस्टाएको स्रोतले बतायो । क्यासिनोमा दलाली गर्ने दलालहरु अहिले भुजेलसँग रेट लिएर पैसा उठाइरहेका छन् । जुवाडेलाई घर न घाटको बनाएर करोडपति बनेका काभ्रेका बलराम सापकोट, छोटे डनको नामले परिचित बिष्णु लामा, ज्यानमार्ने उद्योगमा फरार रहेका दावा लामा, क्यासिनोमा दलाली गर्ने मिलन सापकोटा, स्थालिन शेरचनलगायतले अहिले भुजेलमार्फत सट्टेबाजीको खेलमा बाजि थाप्नेहरुबाट पैसा उठाइरहेका छन् । ठमेलमा ब्यापारको आवरणमा अवैध धन्दा चलाउने गुण्डा राम गिरीले पनि बाजि थाप्नेहरुबाट पैसा उठाइरहेका छन् । गुण्डा गिरीले आफ्नै रेष्टुरेन्ट फेसेज बारबाट सो कार्य गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।
प्रहरीको आडमा रातभर खुल्ने उक्त रेष्टुरेन्टमा फुटबल हेर्न जाने दर्जनौंको संख्यामा जुवाडे र दलाल भेटिन थालेका छन् । त्यस्तै, अर्का सट्टेबाजीका मास्टर हुन ईभान नामले चिनिने कमलपोखरी सिटी सेन्टरका ब्यापारी । सिटी सेन्टरमा रेडिमेड कपडा पसल सञ्चालन गर्दै आएका ईभान सट्टेबाजीको बोलकबोल गराउँछन् । ईभानले आफूनिकट रहेका ब्यापारीको रुपैयाँ सट्टेबाजीमा लगाउदै आएका छन् । ईभानले दैनिक खेल अनुसार ५० लाखदेखि करोडसम्म जम्मा गरि हुण्डीमार्फत विभिन्न मुलुकमा पठाउने गरेको स्रोतको दावी छ । सट्टेबाजको अर्को अखडा बौद्धमा रहेको छ । बौद्धका दिपेश लामा र पाटनमा मनोज ज्यापुको नामले चिनने मनोज श्रेष्ठले बौद्ध क्षेत्रमा सट्टेबाजीको बोलकबोलको रकम लिने गर्छन् । लामा र मनोजले समेत उक्त अवैध कामबाट दैनिक करोडौं रुपैयाँसम्म जम्मा भएको रकम हुण्डीमार्फत बिदेशिने गरेको छ । त्यसैगरी, गुण्डागर्दीमा लागेका कुमार श्रेष्ठ ‘घैंटे’, तेजेन्द्र गुरुङ, मनराज गुरुङ, कबिन शाक्य लगायतले समेत सट्टेबाजी गराउँदै आएको स्रोतले बतायो । सट्टेबाज अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने प्रायजसो खेलमा हुने गर्दछ । भारतमा सवैभन्दा बढी यो सट्टेबाजी क्रिकेटमा हुने गरेको छ भने भारतलाई आर्थिक रुपमा कमजोर बनाउन डी कम्पनी रचेको योजना हो । यसै योजना अनुसार डी कम्पनीले बार्षिक अर्वौ भारतीय रुपैयाँ हासिल गर्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । नेपालमा क्रिकेटको समर्थक न्यून रहेका कारण त्यसको सट्टेबाजी कम मात्रामा हुने गरेको छ । तर, यसपालीको विश्वकप फुटबलमा भने ब्यापक रुपमा यो अवैध खेल फस्टाएको छ । नेपालमा ५ हजार भारतीय रुपैयाँदेखि करोडसम्म सट्टेबाजीमा रकम लगाउने जुवाडे रहेका छन् ।